Meesha ay rajadu sii badanayso rabshadunaa ku dhammaanayso.
Alexandra House waxay bixisaa adeegyada wax looga qabanayo bahdilka iyo kufsiga ee soo haleela haweenka, ragga, dhalliyanrada iyo qoysaskuba. Adeegayda oo idil waalacag la’aan/bilaash waxana soo raaca helitaanka 24ka saacaadood ee hoyga, u doodidda sharciga, daawaynta, kooxaha taakulalynta, adeegyada faragalina iyo kahortagga mushkiladaha dhallinyarada, ilaha xadgubka ka jira waayeelnimada, waxbarashada jaalliyada iyo tababarka xirfadeed, iyo wax intaa ka sii badan. Waxaannu deggannahay magaalooyinka Blaine iyo Anoka, sidoo kalena waxaannu adeegayda bahdilka iyo kufsigaba gaarsiinaa Minnesota oo idil.
Waa maxay rabshadda bahdilka (dagaalka guriga)?
Waa nidaam xadgub socda ah ee lagu sameeyo qof si loogu awood sheegto ama lagu xukumo iyo gacanta lagu hayo. Bahdilka waxuu ay noqon karaa mid jireed, galmo, qiireed, dhaqaale, tallaabooyin maskaxeed ama handadaadyo ee saamaynaya qof kale.
Ma tahay mase dhici kartaa in aad dhibbane noqotid?
Jaarkaaga ma kaa maseyraa marka aad waqti la qaadatid saaxibbadaada, qaraabadaada, ama dadka kula shaqeeya?
Jaarkaaga ma xannibaa ama ma xadidaa waxqita aad la qaadatid saaxibbadaada, qaraabadaada, ama dadka kula shaqeeya?
Jarkaaga si joogto ah ma ku canaantaa iyo ku yasaa waxyabo ad samayso ama tiraahdo?
Waa maxay dagaalka galmada (kufsiga)?
Isticmaalka tallaaboooyinka galmada ama erayada ee aan loo baahnayn iyo/ama dhaawacaya qof kale. Tallaabooyinka qaarkood ee noocan ah waxa ay ku qeexanyihiin dembiyo sida uu qorayo dastuurka Minnesota. Dhacdada tacdiyaada ee galmada ah qaarkood waxa ay dhaawacayaan xudduudaha shakhsiyeed balse lama dhihi karo waxay gaarayaan heer dambi.